Kwụsị ide, ezigbo odee! - Lovemụ nwoke Love - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Kwụsị ide, ezigbo odee! nkezi 2.9 / 5 si 14
NA / A, o nwere ihe nlere 18.7K
fantasy, Weebụ, Yaoi
Hee-wun bụ onye enyemaka nke enyi ya bụ nwata Geon-ju, onye ezinụlọ ya bara ọgaranya kpọbatara ya mgbe ọ bụ nwata. Ruo ọtụtụ afọ, ọ nọ na-elekọta ndị enyi ya na onye isi ya, mana Geon-ju yiri ka ọ nweghị nkọwa. Na-ada ka ihe nke BL romance, nri? Ọ na-apụta, ndụ Hee-wun bụ n'ezie. Abalị ahụ tupu Hee-wun bụ ịmalite ọrụ ọhụụ maka Geon-ju, ọ na-ahụ akwụkwọ ọhụụ dị ịtụnanya ebe ndị isi akụkọ nwere aha ha. Ọ bụ ihe ọchị ndaba… ruo mgbe ọ nwetara Hee-wun na-eti mkpu, “Kwụsị Ide, Ezigbo Onye edemede!”
Isi nke 41 nkwụsị ss1 April 23, 2021
Ime Anwansi Anwansi Zio
Panty & Nchekwa Na Garterbelt Na Manga warara